विश्व रक्तदाता दिवसमा छलफल – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
विश्व रक्तदाता दिवसमा छलफल
२०७१ असार १, आईतवार ०२:१६ गते
\_भरतपुर । विश्व रक्तदाता दिवस शनिबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । ‘रक्तदान गरौं, जीवन उपहार दिऔं’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस विश्वभर मनाइएको हो । यस अवसरमा नेपालमा पनि रक्तदानस“गै विभिन्न कार्यक्रम गरिए ।
स्वयम्सेवी रक्तदाता समाज चितवनले भरतपुरमा विचार गोष्ठी आयोजना ग¥यो । सोक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले रक्तदान गर्न आम सर्वसाधारणलाई जतिसक्दो उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दिनानुदिन ताजा रगतको माग बढ्दै जाने तर आपूर्ति कम हुने गरेकाले रक्तदानमै ध्यान केन्द्रित गर्न उनीहरुले सुझाए ।
कार्यक्रम समाजका अध्यक्ष ध्रुव थपलियाको अध्यक्षता तथा चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरका अध्यक्ष डा. हरिश्चन्द्र न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । सो क्रममा समाजका अध्यक्ष थपलियाले सबैको सहयोग पाए चितवनलाई रक्तदानका लागि नमुना जिल्ला बनाउने प्रण गरे ।
मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा प्रमुख अतिथि डा. न्यौपानेले रक्तदाता बढाउन भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । ‘अहिले एक पोका रगतबाट चार पोका बनाउन मिल्ने प्रविधि आइसक्यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एकै जनालाई दिएर रगत दुरुपयोग गरिरहेका छौं, प्राविधिक सहयोग गर्छौं सदुपयोग गरौं ।’
त्यस्तै निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका अध्यक्ष डा. नारायणसिंह कु“वरले पनि जनचेतना तथा उत्प्रेरणा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने वचन दिए । रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरका दीपक न्यौपानेले रगत संकलन गर्न निकै गाह्रो भएकाले सधैं अभाव सिर्जना हुने गरेको बताए ।
गोष्ठी कार्यक्रम संयोजक हीरामान महर्जनले समाजले रक्तदातालाई चेतना अभिवृद्धिको काम गरिरहेको बताए । सो क्रममा समाजका उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ताले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।